१२ वर्षीया बालिका सम्झनाको न्यायका लागि अगाडी आए एलिजादेखि सोनिका - Rising Dainik
September 29, 2020 BANDANA KHADKALeaveaComment on १२ वर्षीया बालिका सम्झनाको न्यायका लागि अगाडी आए एलिजादेखि सोनिका
काठमाडौं । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेको छैन । यस्तै प्रकृतिको अर्को घ’टना बझाङमा घ’टेको छ । सम्झना विश्वकर्माको ‘घटनामा जोडिएकाको आ’रोपमा प’क्राउ परेका युवक यसअघि पनि त्यस्तै घ’टनामा संलग्न भएको खुलेको छ ।गत बुधबार बालिकामाथी सोच्नै नसक्ने घ’टना भयो । मस्टा गाउँपालिका–२ की १२ वर्षीया सम्झनाको ला’श सिममाडौं मन्दिरमा फेला परेको थियो ।
सोही दिन प्रहरीले मस्टा–२ खिकालाका २० वर्षीय राजेन्द्र बोहरालाई प’क्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा बोहरा शृंखलाबद्ध यस्तै घ’टनामा जोडिएको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीएसपी रूपक खड्काले बताए । उनका अनुसार बोहराले गत साउन २६ मा खिकालाकै १४ वर्षीया दलित बालिकालाई यस्तै गरेको घ’टनालाई गाउँमै गुपचुप मिलाइएको खुलेको हो ।
साँझ ५ बजेतिर धनचडी बोहराको पानीघट्टमा अन्न पिस्न पुगेकी बालिकालाई उनले इज्जत लुटेका थिए । त्यो बारे आइतबार मात्रै जाहेरी आएको डीएसपी खड्काले बताए ।५ कक्षामा पढ्ने ती बालिकाले तीन दिनपछि मात्रै घ’टनाबारे आफ्नी भाउजूलाई सुनाएकी थिइन् । त्यसपछि परिवारले पञ्चायती बसालेका थिए । पञ्चायतीमा ‘एकै गाउँका भाइबहिनी हुन्, यत्तिको घटना भइहाल्छ’ भन्दै पाँच सय जरिवाना गराएर घटना गाउँमै सामसुम पारेका थिए ।दुवै पक्षबीच भएको मिलापत्रमा राजेन्द्रका बुवा र बालिकाका दाजुसहित ६ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । मिलापत्रमा बच्चा पेटमा बसेको खण्डमा युवकले जिम्मा लिने’ व्यहोरा उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जालमा नायिका नायिका एलिजा गौतमले लेखेकी छिन,‘ कति सरकारको मुख ताकेर बस्ने हामी ? कती चुपलागेर बस्ने । यो भन्दा अति कस्तो होला ? अब के हामी जनता सडक मा उत्रिएर आ$गो लाउनु परेको हो सरकार । अब हामी सहन सक्दैनौ हाम्रो छोरी लाई न्याय देउ नत्र हामी जनतालाई थाहा छ अब के हुन्छ यसको परिणाम ।’ लामो समयदेखि चर्चित युट्यबर सोनिका रोकाया पनि सम्झनाको न्यायका लागि लागिरहेकी छिन् ।
अब ‘५ लि’टर र’क्सी, १० लि’टर जाँ’ड मात्र बनाउन पाउने
काठमाडौं / सर्वोच्च अदा’लतले बढीमा ५ लिटर घ’रेलु र’क्सी र १० लिटरसम्म जाँ’ड बनाउन दिन आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले वर्षमा ६ पल्टभन्दा बढी जाँ’डर’क्सी पार्न नदिन भनेको छ।
न्या’याधीश हरिकृष्ण कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इ’जलासले जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल अ’सरलाई ध्यानमा राखी जाँ’डर’क्सीको सीमा तोकिदिएको हो।
भारतीय सैनिक माथि फेरी आ’क्रम’ण, २ जनाको नि’धन
October 5, 2020 BANDANA KHADKA
एसिड आ’क्रमण गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न सरकारले ल्यायो अध्यादेश
September 25, 2020 BANDANA KHADKA
बाग्लुङमा पहिरोले भ’त्कायो गोठ, एक जना बे’पत्ता